Yini isiguli esingayenzela i-Urticaria? - GAAPP
Ikhaya>Yini isiguli esingayenzela i-Urticaria?
Yini isiguli esingayenzela i-Urticaria?Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T12:39:08+02:00
Isinyathelo esibaluleke kakhulu ukukhomba izimbangela ze-Urticaria futhi unqume umkhawulo ngamunye. Ngemuva kwalokho, i-trigger kufanele igwenywe kuze kube sezingeni lokhu okungenzeka ngalo. Qhubeka nedayari yakho ukubhala phansi inkambo yalesi sifo ngokunembile. Ukuhlaselwa okumbalwa noma ukwehla kobukhulu bokuhlaselwa sekuvele kuyimpumelelo.
Ngokuxhumanisa ne- some izinhlobo ze-urticaria, ukujwayela okufana ne-immunotherapy esetshenziswa maqondana neziguli ezaliwa ngumzimba kungenzeka. Ngokwengxenye lokhu kungenxa yokuthi amangqamuzana amakhulu, lapho esekhiphe i-histamine yawo, athatha isikhashana aze aqale ukusebenza ngokuzayo. Ezinye iziguli zisebenzisa lokhu ngamabomu.
Isibonelo, ukugeza okubandayo kwansuku zonke (ingalo) kungadala ukuthi izimpawu ezibandayo ze-urticaria zinyamalale usuku lonke noma okungenani zinciphise lezi zimpawu. Umuntu ophendula ukucindezelwa ngamasondo angaqala amasondo ngamabomu ngokuhlikihla noma ukucindezela ngaphambi kwesimo esinengcindezi esifana nokuhlolwa noma ukuxoxwa ngomsebenzi ukuze asinde ukulunywa esimweni esicindezelayo sakamuva. Kepha ngicela uxoxe ngezinyathelo ezinjalo nodokotela, ngoba ukusabela kuyahlukahluka kakhulu futhi akekho okufanele abeke engcupheni yokuphendulwa ngodlame uma lungekho usizo olutholakalayo.
Ingcindezi, ngasendleleni, imvamisa iyisiqalo noma i-amplifier ye-urticaria. Kuyiqiniso ukuthi “gwema ukucindezeleka” kulula ukusho kunokukwenza. Futhi, ukugcina idayari kuzokusiza ukuthi ubone ukucindezeleka okubangela i-urticaria. Izindlela zokufunda zokuphumula noma ukuqeqeshwa kwe-autogenic kungasiza.
Gwema ukuthatha ama-NSAID (izidakamizwa ezingezona ukuvuvukala ezingezona i-steroidal). Lokhu kufaka phakathi, isibonelo, i-acetylsalicylic acid (ku-aspirin, Thomapyrin njll.), I-diclofenac, ibuprofen, phenylbutazone. Ukuthatha ngisho umthamo owodwa womunye wale mithi kungadala ukuhlaselwa isifuba.
Ikakhulukazi gwema iziphuzo ezidakayo ezinobufakazi obuphezulu. Utshwala bungacasula ulwelwesi lwesisu ukuze ama-enzyme athile womgudu wamathumbu (i-diamine oxidases) adingekayo ekwehlisweni kwe-histamine angabe esakwazi ukwehlisa i-histamine efuthwe ngokudla ngokwanele.
I-Histamine bese ifakwa egazini nge-mucosa yamathumbu amancane futhi ingadala i-urticaria futhi ukungaphatheki kahle okuhambisanayo. Utshwala bungadala ukuthi amangqamuzana amakhulu, okuyizimbangela eziyinhloko ze-urticaria, asebenze kalula.
Ukudla okubabayo nakho kungacasula ulwelwesi lwamafinyila ngakho-ke kuvame ukubekezelelwa kabi futhi kufanele kugwenywe yiziguli ze-urticaria.
Imibhalo enedayari ye-Urticaria - Uhlelo lokusebenza:
Sebenzisa idayari yakho ye-urticaria kuhlelo lokusebenza olulandelayo:
Itholakala mahhala nge- iPhone futhi Android Ama-smartphone